Evolution Dhalada Cadarka: Cadar isku mid ah, qaab kala duwan oo loo furo
Sheekooyinka qadiimiga ah iyo halyeeyga guud, cadarku sidoo kale wuxuu leeyahay taariikh dahsoon oo dheer. Taariikhda dheer waxay noqotay mid adag in la xaqiijiyo waqti kadib, iyo qaabka cadarka loo isticmaalo ayaa isbadalay horumarka dhanka farsamada.
Is beddellada isticmaalka cadarka:
Waa cadar, laga soo bilaabo Laatiinka per fumum, oo macnaheedu yahay 'qiiq' .Boor udgoonka ugu badan ee asalka ah waxaa lagu sameeyaa fooxa fooxa, waxaa loo isticmaalaa in lagu caabudo ilaahyada, waxay u taagan tahay muqaddas iyo lama taabtaan.
Mid ka mid ah waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee soo maray taariikhda barafuunka, ayaa hadana, si weyn u wanaajiyey habka soo saarista cadarka, soo saarista cadarka ayaa kordhay, isticmaalka cadarku mar dambe kuma koobnayn qoyska boqortooyada. Muddadan, cadarka ayaa la keydiyay dhalooyinka cadarka, badanaa furka ayaa loo isticmaali jiray joojiyayaal si loo joojiyo urka inuu baxsado, ul baaris ah ayaa loo isticmaalay in lagu carfiyo cadarka gacmaha iyo qoorta.
3.Fanaanku waa macaan yahay
Kahor soo bixida dhalooyinka lagu buufiyo, taageerayaasha waxaa badanaa loo isticmaali jiray inay ku buufiyaan cadarka.Dar udgoonka udgoonkiisa haanta si ay udgoon udgoon u hesho inta la isticmaalayo. Muddo dheer haysata.Markii ay soo ifbaxayeen buufinta lagu buufiyo, taageerayaasha waxay noqdeen aalado lagu soo bandhigo dukaamada cadarka.
Sannadkii 1907-kii dhalashadii atomkii ugu horreeyay ee "atom" ("Perfumers") waa horumarkii ugu horreeyay ee wax ku ool ah ee ku saabsan habka loo isticmaalo cadarka. Waxay u rogtaa cadarka dareeraha ah qaybo yaryar oo waxay ku buufisaa qaab buufis ah oo madaxa rusheeyaha ah. waxay abuurtay warshad cusub, iyada oo soosaarayaashu ay abuurayaan dhalooyin madhan, oo lagu buufiyo qurxinta taas oo dadka ku dhiirrigelisa inay keydiyaan cadarradooda ay jecel yihiin illaa iyo inta suurtogalka ah
5.Mucjiso iyo Atakor sannadihii 1930-naadkii
Aaladda atomiga cadarka ee xilligan waxay leedahay laba nooc oo madaxa riyaaqa, waxa hore u soo muuqday waa barafuunka buufinta barkinta shilka, dhalada cadarka cadaadi si ay u qaadato bacda hawada si tartiib ah markaad isticmaaleyso, waxay buufin kartaa ceeryaamo macaan.
6.Ka mid ah dhalooyinka cadarka ugu caansan ee sanadkii 1907
Soo bixida buufinta buufiska ah waxay kadhigtay waqtiga haynta cadarka inay sii waarato Ilaa iyo hada, inta badan cadarka waa in la isticmaalo madaxa damiya saxaafada, lagu buufiyo cadarka madaxa rusheeyaha saxaafadda.
7.Le Sien, Amour-Amour iyo Que Sais-Je1925-1928
Si indhaha macaamiisha loo soo jiito, soo saarayaashu waxay si adag uga shaqeeyeen qaabeynta iyo baakadaha dhalooyinka cadarka. Coty waxay ku shubtay cadar galaas kabo cidhib dhaadheer leh, oo ah mid qurux badan oo qurux badan. Dhalo kasta oo Marotte ah waxay leedahay qaab koofiyad ka duwan, qurux badan iyo carruurnimo hodan ah; markasta soo jiito dareenka dumarka waqtiga ugu horeeya.
COMI AROMA – waxay ku siinayaan noocyo ka mid ah dhalooyinka galaaska cadarka ah, maaddada muraayadda sare leh, oo cadarkaaga ka sii dhig.